Homeसमाचारकालिन्चोक भगवतीको दर्शन स्वरूप शेयर गर्दै यो साताको साप्ताहिक राशीफल हेर्नुस !!
December 15, 2018 Spnews समाचार Comments Off on कालिन्चोक भगवतीको दर्शन स्वरूप शेयर गर्दै यो साताको साप्ताहिक राशीफल हेर्नुस !!
मेषः– शनिबार थोरै काम बन्नेछन् । शनिबार अपरान्हबाट सोमबार सम्म समयले साथ दिने छैन । फजुल खर्च,विवाद बढ्न सक्छ । परभावको सम्भावना देखिन्छ । मिथ्या आरोप लाग्न सक्छ । मंगलबार र बुधवार सुखद रहनेछन । व्यापर व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ । पारिवारिक समस्या समाधान भएर जानेछन् । इज्जत प्रतिष्ठा बढ्नेछ । अवरुद्ध काम अगाडि बढ्नेछ । भोज भतेरमा सहभागि हुने अवसर आउनेछ । संकल्प पुरा गर्न सकिनेछ । विहिबार र शुक्रबार मध्यम देखिन्छ, धन लगानी नगर्नु होला । अरुको भर परेर काम नगर्नु होला ।
वृषः– सोमवार सम्म समयले पूर्ण साथ दिनेछ । आकस्मिक आम्दानीको योग देखिन्छ । पारिवारिक शुख,शान्ति मिल्नेछ । उप्रान्त बुधबार सम्म समय खराव देखिन्छ । अनावस्यक खर्च बढ्नेछ । काममा समस्या आउने देखिन्छ । झुट्टा कुराले सताउनेछ । नयाँ योजना अगाडि नबढाउनु होला । शेष साता भने उत्तम रहेकोछ । अधुरा कार्य सम्पादन हुनेछन । असहयोग गर्ने सहयोगको याचना गर्दै अगाडि आउने छन् । जीवन साथीले साथ दिनेछन् । प्रयत्न गरेमा नयाँ काम हात पर्नेछ । फलदायी यात्राको योग देखिन्छ । व्यापार व्यवसायबाट सोचे भन्दा राम्रो आम्दानी हुनेछ ।
मिथुनः–विहिवार विहान सम्म समय अत्यन्त राम्रो देखिन्छ । शारीरिक एवं मानसिक स्फूर्ति बढ्नेछ । रोकिएका अधिकाँश काम सफल हुनेछन् । सहयोगी मन भेटिने छन् । बाह्य सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । सामाजिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ । व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ । आफन्तबाट सहयोग सहानुभूति मिल्नेछ । शेष दिन नकरात्मक देखिन्छ । फजुल खर्चमा अत्याधिक वृद्धि हुने देखिन्छ । अनावस्यक झै झमेला आई लाग्ने छन् । विश्वास गरेकाले धोका दिनेछन् । नयाँ क्षेत्रमा लगानी नगर्नु होला ।
कर्कटः–शनिबारको दिन खराव देखिन्छ । मानसिक चिन्ता बढ्नेछ । झुट्टा कुराले सताउनेछ । फजुल खर्च वृद्धिले आर्थिक संकट पर्नेछ । रविबार देखि समय विस्तारै अनुकुल हुनेछ । धार्मिक गतिविधि बढ्नेछ । प्रयत्न गर्दा धेरै ठाँउमा सफलता मिल्नेछ । अधुरा योजनाहरु अगाडि बढ्ने छन् । काम गर्दा इज्जत प्रतिष्ठा बढ्नेछ । व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ । आफन्तको सहयोग मिल्नेछ । साझेदारी भन्दा एक्लौटी कामबाट बढि लाभान्वित हुनुुहुनेछ । बोलीको प्रभाव पर्नेछ । विरोधीहरु कमजोर बन्ने छन् । मुद्धा मामिलामा जीत हुनेछ ।
सिंहः– शनिबार सामान्य अनुकुल देखिन्छ । उप्रान्त सोमबार सम्म समय अत्यन्त खराव रहनेछ । स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ । काम काजमा विलम्ब हुनेछ । अनावस्यक खर्च बढ्नेछ । विश्वास गरेकाले धोका दिने छन् । चोटपटकको भय देखिन्छ । मंगलबारबाट समयमा विस्तारै सुधार आउनेछ । धर्म कर्म तिर मन जानेछ । यात्राको योजना बन्नेछ । विहिबार विहानबाट समय बढि अनुकुल हुनेछ । सामान्य प्रयासबाट धेरै काम सफल हुनेछन् । व्यापार व्यवसायमा सुधार आउनेछ । शैक्षिक र वैदेशिक मार्ग सफल रहलान । बाह्य सम्बन्धमा सुधार आउनेछ ।
कन्याः– सोमबार सम्म समाय सामान्य अनुकुल रहनेछ । प्रयत्न गरेमा नयाँ काम हात लाग्न सक्छ । प्रेमिकाले साथ दिने छन् । आयत निर्यात व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ । विदेश यात्राको सम्भावना पनि देखिन्छ । उपकारी काम हुनेछन् । मंगलबार देखि भने समयले साथ दिने छैन । स्वास्थ्यमा समस्या आउनेछ । काम काजमा विलम्भ हुनेछ । बन्न लागेका काम विग्रिने छन् । विश्वास र भरोसा टुट्नेछ । आर्थिक समस्या झेल्नु पर्नेछ । राज्यबाट प्रतापिड हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । कार्य क्षमतामा ह्रास आउनेछ । धोका दिनेछन् ।
तुलाः– विहिबार विहान सम्म समय अनुकुल नै देखिन्छ । संघर्ष गर्नु परे पनि उपलब्धिले सन्तुष्टि बनाउनेछ । प्रयत्न गरेमा नयाँ काम हात लाग्नेछ । दामपत्य जीवनमा सुखानूभूति हुनेछ । विदेश यात्राको योग पनि देखिन्छ । मुद्धमा मामिलामा विजय हात लाग्नेछ । शेष साता प्रतिकुल देखिन्छ । लगानी अनुसारको प्रतिफल मिल्ने छैन । सहयोग गर्ने भन्दा खुट्टो तान्ने बढि हुनेछन् । स्वास्थ्यले कम साथ दिनेछ । समस्याको जालोले घेर्नेछ । योजना अलपत्र पर्ने छन् । साझेदारले धोका दिनेछ । व्यापारमा गिरावट आउनेछ ।
वृश्चिकः– साताको पूर्वाद्ध भन्दा उत्तराद्र्ध बढि अनुकुल हुनेछ । शनिबार खराव देखिन्छ । रविबार र सोमबार सामान्य अनुकुल देखिन्छ । दुविधामा नपरि,काममा विवाद नगरि अगाडि बढ्नु होला । मंगलबार देखि समय बलबान हुनेछ । गोपनिया भङ्ग नगरि काम गर्नु होला । मुद्धा मामिलामा जीत हुनेछ । संघर्षबाट टाढा नभाग्नु होला उपलब्धि राम्रै हात लाग्नेछ । विदेश यात्राको योग पनि देखिन्छ । आयात निर्यात व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ । पारिवारिक सुख शान्ति मिल्नेछ । महत्वकाँक्षी योजना अगाडि बढ्ने छन् ।
धनुः– मिश्रित फलदायि साता छ । कामलाई निरन्तरता दिनु होला । आर्थिक कारोवारमा सचेत रहनु होला । आफन्त भए पनि आन्तरिक कुरा नखोल्नु होला । सुरु त्यति अनुकुल देखिदैन,अन्त्य सुखद रहनेछ । संघर्षबाट टाढा नभाग्नु होला । अरुको भरमा मात्रै पनि काम नगर्नु होला । साताको अन्यतिर महत्वपूर्ण काम हुनेछन् । कार्य लगनसिलता बढ्नेछ । गरेका कामले फाइदा हुनेछ । व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ । विदेश यात्राको अवसर आउन सक्छ । पारिवारिक सुख,शान्तिमा वृद्धि हुनेछ । हेलचक्र्याईबाट टाढा बस्नु होला ।
मकरः– शनिबार आर्थिक कारोवारमा सचेत रहनुहोला । आइतबार र सोमबार साता कै अनुकुल दिन हुनेछन् । काम गर्ने जोश जागर बढ्नेछ । प्रयत्न गर्दा केहि नयाँ काम हुनेछन् । पढाई लेखाईमा प्रगति हुनेछ । व्यापार व्यवसायबाट अम्दानी बढ्नेछ । मंगलवार देखि समयले त्यति साथ दिने छैन । पारिवारिक खर्च बढ्नेछ । कामको स्पष्ट रेखा कोर्न सकिने छैन । विश्वास र भरोसा टुट्नेछ । घात प्रतिघातको सम्भावना देखिन्छ । लगानीमा समस्या आउनेछ । सोच विचार आफुलाई सक्रिय बनाउनु होला । साझेदारी काममा हात नहाल्नु होला ।
कुम्भः– ४ गते विहान सम्म समय अनुकुल जस्तै देखिन्छ । आर्थिक कारोवारमा ध्यान दिनु होला । उद्योग पराक्रम बढ्नेछ । गरेका काम उपलब्धिपूर्ण रहनेछ । नयाँ कार्य योजना अगाडि बढ्ने छन् । आफ्नो काम गर्न आफै सक्षम हुनुहुनेछ । व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ । नोकरी तथा राजनीतिमा सफलता मिल्नेछ । शेष दिन भने प्रतिकुल रहन सक्छ । कहि कतैबाट आस्था र विश्वासमा चोट पुग्न सक्छ । पारिवारिक खर्च बढ्नेछ । काम गर्ने जोश जागर घट्नेछ । अरुको काम गरेर जश पाईने छैन । दिक्दारी भईनेछ ।
मिनः– शनिवारको दिन त्यति अनुकुल देखिन्न । फजुल खर्च बढ्नेछ । व्यापारमा मन्दि लाग्नेछ । लगानी गलत ठाँउमा पर्नेछ । रविबार र सोमबार काम गर्ने उत्साहा बढ्नेछ । अनावस्यक खर्चमा वृद्धि हुनेछ । भोज भतेर सभा सम्मेलनमा भाग लिने अवसर मिल्नेछ । प्रयत्न गर्दा नयाँ काम हात लाग्नेछ । काम गर्दा मनग्य दाम कमाउन सकिनेछ । मंगलबार र बुधबार आर्थिक कारोवारमा ध्यान दिनु होला । विहिबार विहानबाट समय पुन अनुकुल हुनेछ । आफन्तको सहयोग मिल्नेछ । पढाई लेखाईमा प्रगति हुनेछ । पुराना समस्या समाधान हुनेछन् । व्यापार बढ्नेछ ।
भारतमा ३३ किलो सुनसहित दुई नेपाली पक्राउ, गोरे समूहको हराएको सुन हुनसक्ने अनुमान
काठमाडौं लगायत देशभरीकै आज बढी चिसो
कालिन्चोक भगवतीको दर्शन गरी पौष ०९ गते सोमबारको राशिफल पढौ, भेटी स्वरुप एक सेयर गरौं
December 23, 2018 Spnews समाचार Comments Off on कालिन्चोक भगवतीको दर्शन गरी पौष ०९ गते सोमबारको राशिफल पढौ, भेटी स्वरुप एक सेयर गरौं
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) – आज बिग्रिनै लागेको कुनै काम बन्न सक्छ । पारिवारिक समस्या हल गर्ने दिन हो । मनमा आध्यात्मिक र वैराग्यका भावना सञ्चरण हुनसक्छन् । पारमार्थिक […]
कालिन्चोक भगवतीको दर्शन गरी फागुन ५ गते आइतबारको राशिफल पढौ, भेटी स्वरुप एक सेयर गरौं
February 16, 2019 Spnews समाचार Comments Off on कालिन्चोक भगवतीको दर्शन गरी फागुन ५ गते आइतबारको राशिफल पढौ, भेटी स्वरुप एक सेयर गरौं
मेष(चू,चे,चो,ला,लिई,लू,ले,लो,अ) : व्यावसायकै सन्द्रर्भमा लामो दुरीको व्यावसायिक यात्रा हुनेछ । यात्रा तथा पर्यटकीय व्यावसाय फस्टाएर जानेछ । धार्मिक तथा शैक्षिक क्षेत्रमा सहभागी भई उत्कृष्ट नतिजा हात लगाउन सकिनेछ । प्रेम प्रशङगमा रमाउन चाहनेहरुका लागि समयले […]
कालिन्चोक भगवतीको दर्शन गरी पौष १७ गते मंगलबारको राशिफल पढौ, भेटी स्वरुप एक सेयर गरौं
December 28, 2018 Spnews समाचार Comments Off on कालिन्चोक भगवतीको दर्शन गरी पौष १७ गते मंगलबारको राशिफल पढौ, भेटी स्वरुप एक सेयर गरौं